कसरी शोटाइम कुनै पनि समय सक्रिय गर्ने (शोटाइमनिटाइम समय / सक्रिय) - कसरी
शोटाइम कुनै पनि समय एक अनुप्रयोग हो जुन केबल वा स्याटलाइट, र लाइभ स्ट्रिमिंग ग्राहकहरूले पनि घर वा कहिँ पनि नि: शुल्क शोटाइम स्ट्रिम गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्।
शोटाइम कुनै पनि समय मूलतः एक सेवा हो कि पुरस्कार-विजेता शोटाइम मूल श्रृंखला, हिट चलचित्र, खेलकुद, हास्य विशेष, र अधिक धेरैको वाणिज्य-रहित पूर्ण asonsतुहरूको तत्काल पहुँच प्रदान गर्दछ, र थप तपाईंले हालको शोटाइममा प्रत्यक्ष के हुँदैछ हेर्न सक्नुहुन्छ। जब पनि र जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ, कुनै पनि समर्थित उपकरणमा युएसमा हुँदा हेर्नुहोस्।
शोटाइम कुनै पनि समय तपाईको अवस्थित शोटाइम सदस्यताको अंशको रूपमा निःशुल्क उपलब्ध छ।
शोटाइम कुनै पनि समय बाहिर विभिन्न चरणहरूमा पहुँच गर्न सकिन्छ। ठिक छ, यदि तपाईंसँग पहिले नै शोटाइम सदस्यताहरू छन् भने यो शोटाइम सदस्यतासँग मद्दत गर्न पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ। त्यसो भए, कुनै पनि समय शोटाइमका लागि अतिरिक्त खर्च छैन।
शोटाइम कुनै पनि समय भुक्तान गरिएका सेवाहरू मध्ये एक हो, त्यसैले हामीले हाम्रा ग्याजेटहरूमा सेवा प्रयोग गर्न हामीले खरीद गर्नु पर्छ। शोटाइम कुनै पनि समय सर्वेक्षणको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र उपलब्ध छ।टिभी बक्स ग्राहकहरू तिनीहरूको स्मार्ट टिभीमा साइट भ्रमण गरेर कुनै पनि समय शोटाईम सक्रिय गर्न सक्दछन्। यो धेरै अद्वितीय टिभी व्यवस्था प्रदान गर्दछ।
तपाइँसँग सदस्यता नभए पनि तपाइँलाई तनावको आवश्यकता पर्दैन, जबकि शोटाइम कुनै पनि समय शोटाइम कुनै पनि समय / सक्रियकर्तामा नि: शुल्क प्रारम्भिक प्रस्ताव गर्दछ।सजिलैसँग कुनै पनि समयमा शोटाईम प्रयोग गर्नुहोस् र अनन्त मनोरन्जन हेर्न सुरू गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग पहिले नै एक सहभागी टिभी प्रदायक लगइन भएको छ भने, त्यसो भए सोझिटको शोटाइम कुनै पनि समय पछ्याउनको लागि तुरून्तै सक्रिय गर्नुहोस्।
प्राइम भिडियो नि: शुल्क ट्रायल कसरी पाउने?
Roku मा कुनै पनि समय शोटाईम गर्न कदमहरू:
प्रक्रिया रोकिउमा कुनै पनि समयमा शोटाइम सक्रिय गर्न -
पहिले, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको रोकू पूर्ण रूपमा सक्रिय छ।
त्यस बिन्दुमा, तपाइँको वेब आयोजक जाँच गर्नुहोस्।
अर्को, तपाइँले गर्न आवश्यक छ, तपाइँको https://www.roku.com/ जडानमा जानुहोस्, तपाइँको रेकर्ड लगईन गर्नुहोस्, र रोकु च्यानल स्टोरमा जानुहोस्।
त्यस पछि, तपाइँ वेब ब्राउजर द्वारा शोटाइमटाइनेटाइम / एक्टिभेटमा जानु पर्छ।
जब तपाईं त्यस बिन्दुमा हुनुहुन्छ, केवल 'च्यानल समावेश गर्नुहोस्' मा क्लिक गर्नुहोस् र शोटाइम कुनै पनि समय च्यानल सक्रिय गर्नुहोस्।
तपाइँको रोकू खोल्नुहोस् र 'होम' स्क्रिन अन्वेषण गर्नुहोस्।
त्यसो भए सेटिंग्स> फ्रेमवर्क वैकल्पिक> प्रणाली अपडेट> अब जाँच गर्नुहोस्।
यस विन्दुमा, च्यानल स्टोरमा जानुहोस् र शोटाइम कुनै पनि समय च्यानल खोज्नुहोस्।
समावेश गरिएको च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ, वर्तमानमा शोटाइमटाइनिटाइम / एक्टिभेट च्यानल तपाईंको रोकू च्यानल सूचीमा पहुँचयोग्य छ।
तपाईंले आफ्नो च्यानल कोड पुनः प्राप्त गर्नका लागि शोटाइम कुनै पनि समय च्यानल पठाउनु पर्छ।
तपाइँको कम्प्युटरमा जानुहोस्, कुनै पनि समय शो / टाईप गर्नुहोस् / सक्रिय गर्नुहोस्।
हाल Roku दर्ता विकल्प मा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंको सक्रिय शोटाइम कुनै पनि समय कोडमा प्रविष्ट गर्नुहोस्।
हालै बटन थप्नुहोस् बटन।
केही क्षण पछि, तपाइँको रोकू स्वाभाविक रूप से ताजा हुनेछ र तपाइँ शोटाइनिटाइम समय / सक्रिय हेर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ।
तपाईको एप्पल टिभीमा कुनै पनि समय शोटाईम गर्न कदमहरू:
यहाँ एप्पल टिभीमा कुनै पनि समय शोटाईम कसरी सक्रिय गर्ने चरणहरू छन्:
पहिले तपाईको एप्पल टिभीमा शोटाईम अनुप्रयोग खोल्नुहोस्।
अब, शोटाइम च्यानलमा कुनै पनि प्रोग्राम खोल्नुहोस् र त्यसपछि प्ले बटन चयन गर्नुहोस्।
अब, प्रदायकहरूको सूचीबाट तपाईंको टिभी प्रदायक चयन गर्नुहोस्।
दिमागमा राख्नुहोस्, यहाँ, तपाईंलाई तपाईंको शोटाइम खातामा तपाईंको सदस्यता पुष्टि गर्न साइन इन गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ।
छनौट पछि, एक सक्रियता कोड तपाइँको एप्पल टिभीमा प्रदर्शित हुनेछ। त्यसोभए, यो लेख्नुहोस्।
अब तपाइँ के गर्नु पर्छ, खोल्नुहोस् www.showtimeanytime.com/ सक्रिय तपाइँको कम्प्युटर, ट्याब्लेट, वा फोन मा एक वेब ब्राउजर मा।
अर्को, यदि तपाईं स्वचालित रूपमा साईन ईन हुनुभएको छैन भने, लगईन बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईंको प्रयोक्ता नाम र पासवर्ड प्रयोग गर्नुहोस् सेवा प्रदायकद्वारा तपाईंको खातामा लग इन गर्नका लागि।
अब तपाईंले खाली सक्रियता कोड बाकसमा तपाईंको सक्रियता कोड प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ।
र एक पटक तपाईंको एप्पल टिभीबाट सक्रियता कोड प्रमाणीकरण भयो, एक सन्देश पर्दामा देखा पर्नेछ।
अब, तपाइँ तपाइँको मनपर्दो शोटाइम श्रृंखला र शोटाइम चलचित्रहरू तपाइँको एप्पल टिभीमा शोटाइम कुनै पनि समयमा हेर्न सुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको Xbox One मा कुनै पनि समय शोटाईम सक्रिय गर्नका लागि चरणहरू:
शोटाईम पनि Xbox One मा अवतरण भयो। यहाँ Xbox One मा कुनै पनि समय शोटाइम कसरी सक्रिय गर्ने र शोटाइमको शो र चलचित्रहरूको असीमित पहुँच हेर्ने चरणहरू यहाँ छन्: तपाईले चाहानु भएको कुनै पनि समय:
तपाईंको Xbox One मा शोटाइम अनुप्रयोग खोल्नुहोस्।
अर्को, शोटाइम कुनै पनि समय च्यानलमा कुनै पनि कार्यक्रम खेल्ने प्रयास गर्नुहोस्।
अब, सूचीबाट तपाईंको टिभी प्रदायक चयन गर्नुहोस्।
प्रदायक छनौट गरेपछि, एक सक्रियता कोड तपाईंको Xbox One स्क्रिनमा प्रदर्शित हुनेछ। यसलाई नोट गर्नुहोस्।
अब, तपाइँको कम्प्युटर, ट्याब्लेट, वा स्मार्टफोन मा एक वेब ब्राउजरमा www.showtimeanytime.com/activate खोल्नुहोस्।
अर्को चरण हो, LOGIN बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि सेवा प्रदायकद्वारा प्रदान गरिएको उपयोगकर्ता नाम र पासवर्ड प्रयोग गर्नुहोस् तपाईको खातामा लग इन गर्नका लागि।
केवल निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् र त्यसपछि खाली सक्रिय पिन बक्समा सक्रियकरण कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
अब एकचोटि तपाईंको Xbox One बाट सक्रियता कोड प्रमाणित भयो, तपाईंको स्क्रीनमा सन्देश देखा पर्नेछ।
अब, तपाइँ तपाइँको मनपर्दो शोटाइम मूल श्रृंखला र शो XT कहिले पनि तपाइँको Xbox One मा जब पनी चाहानुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको सामसु Smart स्मार्ट टिभीमा कुनै पनि समय शोटाईम गर्न कदमहरू:
सामसु Smart स्मार्ट टिभीमा शोटाइम कुनै पनि समय सक्रिय गर्ने प्रक्रिया एकदम सजिलो छ र एप्पल टिभीमा शोटाइम कुनै पनि समय सक्रियणसँग मिल्दोजुल्दो छ। यहाँ कसरी गर्ने भन्ने बारे निम्न चरणहरू छन्:
सर्वप्रथम, तपाइँको सामसु Smart स्मार्ट टिभीमा शोटाइम अनुप्रयोग खोल्नुहोस् र त्यसपछि शोटाइम कुनै पनि समय च्यानलमा कुनै पनि कार्यक्रम चलाउन प्रयास गर्नुहोस्।
अर्को, सूचीबाट टिभी प्रदायक वा स्ट्रिमिंग सेवा प्रदायक चयन गर्नुहोस्।
तपाइँ प्रदायक चयन पछि, एक सक्रियता कोड तपाइँको सामसु Smart स्मार्ट टिभी स्क्रिनमा प्रदर्शित हुनेछ।
अब तपाइँ तपाइँको पीसी, ट्याब्लेट वा स्मार्टफोन मा एक वेब ब्राउजर मा http://www.showtimeanytime.com सक्रिय को यात्रा गर्न को लागी आवश्यक छ।
यदि तपाईं स्वचालित रूपमा साईन ईन हुनुभएको छैन भने, LOGIN विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईं आफ्नो खातामा लग इन गर्न सेवा प्रदायक द्वारा प्रदान गरिएको प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
स्क्रिनमा निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् र त्यसपछि खाली सक्रियण कोड बाकसमा सक्रियकरण कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
सक्रियता कोड रुजु भएपछि, एक सन्देश टिभी स्क्रिनमा देखा पर्नेछ।
एकचोटि तपाईंले सबै चरणहरू सफलतापूर्वक गर्नुभयो, शोटाइम कुनै पनि समय सामसु Samsung स्मार्ट टिभीमा सक्रिय हुनेछ र तपाईंलाई मनपर्ने केहि हेर्न सुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको एन्ड्रोइड टिभीमा कुनै पनि समय शोटाईम गर्न कदमहरू:
यहाँ तपाईको एन्ड्रोइड टिभीमा कुनै पनि समय शोटाईम सक्रिय गर्नका लागि चरणहरू छन्।
सर्वप्रथम, तपाईंको एन्ड्रोइड टिभीमा गुगल प्ले स्टोरमा जानुहोस् र त्यसपछि शोटाइम अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्।
अर्को चरण भनेको तपाईको एन्ड्रोइड टिभीमा शोटाइम अनुप्रयोग खोल्नु हो र त्यसपछि शोटाइम कुनै पनि समय च्यानलमा कुनै पनि शो वा चलचित्र चलाउन प्रयास गर्नु हो।
त्यस पछि, सूचीबाट तपाईंको टिभी वा स्ट्रिमिंग सेवा प्रदायक चयन गर्नुहोस्।
एक पटक तपाईले प्रदायक छनौट गरिसकेपछि, एक सक्रियता कोड तपाईको एन्ड्रोइड टिभी स्क्रिनमा प्रदर्शित हुन्छ।
अब तपाईले गर्नु पर्ने कुरा भनेको तपाईको पीसी, ट्याब्लेट, वा स्मार्टफोनको वेब ब्राउजरमा www.showtimeanytime.com/activate मा जानुहोस्।
अर्को कुरा, LOGIN विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि सेवा प्रदायकद्वारा प्रदान गरिएको उपयोगकर्ता नाम र पासवर्ड प्रयोग गर्नुहोस् तपाईको खातामा लग इन गर्नका लागि।
अब, स्क्रिनमा निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् र त्यसपछि खाली सक्रियकरण कोड बाकसमा सक्रियकरण कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
एक पटक सक्रियता कोड प्रमाणित भएपछि, एक सफलता सन्देश टिभी स्क्रीनमा देखा पर्नेछ।
अब, तपाइँ तपाइँको एन्ड्रोइड टिभीमा शोटाईममा केहि देख्न सुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
बिभिन्न प्लेटफर्महरूमा कुनै पनि समयमा शोटाइमको आनन्द लिनुहोस्:
तपाईं सजिलैसँग अमेजन फायर टिभी, एप्पल टिभी, एन्ड्रोइड टिभी, क्रोमकास्ट, एलजी टिभी, रोकु, सामसु TV टिभी, एक्सबक्स वन, र अन्य धेरै सहित ग्याजेटहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसैले, कुनै ग्याजेटको कुरा छैन कि तपाई मोशन तस्वीरहरू र टेलिभिजन हेर्नका लागि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, शोटाइम कुनै पनि समय कुनै समस्या बिना नै प्राय: प्रयोग गर्न सकिन्छ।
शोटाइम कुनै पनि समय एक संस्था हो जसले यसको मिडिया लाइब्रेरी एकदम ठूलो बनाउँछ। तपाईं असंख्य मोशन तस्बिरहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ, टिभी देखा पर्दछ, स्ट्यान्ड-अप प्यारोडी शो, र यो सेवा प्रदायकमा उल्लेखनीय रूपमा थप। साथै, शोटाइम कुनै पनि समयको बारेमा सजिलो कुरा भनेको यो सामग्री शीर्ष खाच गोलहरूमा पहुँचयोग्य हुन सक्छ। यो प्राय: धेरै मूल्यवान हुन्छ किनकी तपाईले यो अनुप्रयोग तपाईको कुनै पनि ग्याजेटमा प्रयोग गर्नुहुनेछ मानकमा जोड नदिई। यसका साथै यस अनुप्रयोगको उपयोग गरीरहेको छ यो साइटको यूआई को कारण सरल छ। यो UI ले उपकरणलाई अहिलेको दिन र सहज देखिन्छ जबकि प्रयोग गर्नको लागि अविश्वसनीय सरल रहन्छ।
शोटाइम कुनै पनि समय सेवाहरू उपलब्ध छन्:
SHO.comws ‍ (उनीहरु ःटाउन ‌फिशियल्स ःवेबसाइट) ‌एट्.के.
यो सेवा हाल अमेरिकामा मात्र उपलब्ध छ। यसको प्रयोगकर्ताहरूले दिमागमा राख्नुपर्दछ कि साइटहरू र च्यानलहरूले महादेश र वरपरका क्षेत्रहरू मात्र थप्न सक्दछन्।
हाल, यहाँ शोटाइम परिवारबाट शोटाइम कुनै पनि समयमा निम्न च्यानल प्रदायकहरू छन् -
समय वार्नर केबल
शोटाइम कुनै पनि समयमा सुविधाहरू:
तपाईं दुबैमा के प्रत्यक्ष हुँदैछ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो शोटाईम पूर्व र शोटाइम वेस्ट हो, र तपाईंले आफ्नो आवश्यकता अनुसार च्यानलहरू बीच पनि स्विच गर्न सक्नुहुन्छ।
यसले तपाईंलाई क्रमबद्ध गर्न र शोटाइम कुनै पनि समयमा तपाईंको मनपर्दो प्रोजेक्टहरू हेर्नमा मद्दत गर्दछ।
तपाईं सजिलैसँग आफ्नो मनपर्ने स्मार्ट टिभी बक्स ग्याजेटहरूमा फिल्महरू र दृश्यहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई अफलाईन हुँदा पछि हेर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं फेरि अर्को कार्यक्रममा देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईंले अन्य ग्याजेटमा छाड्नुभयो।
तपाईं यसलाई तपाईंको ट्याब्लेट, फोन, टिभी, वा तपाईंको पीसीमा पनी मनपर्नेको ग्याजेटमा हेर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
हामीले माथि शोटाइम कुनै पनि समय सक्रिय गर्न विधि सूचीबद्ध गरेका छौं। हामी आशा गर्दछौं कि यो विस्तृत र चरण-देखि-चरण मार्गनिर्देशन कसरी शोटाइम कुनै पनि समय तपाईंको उपकरणमा शोटाइम प्रयोग गरी कुनै पनि समय / एक्टिभेट प्रयोग गरेर तपाईंलाई तपाईंको स्मार्टफोनमा शोटाइम कुनै पनि समय सक्रिय गर्न दिई सहयोग पुर्‍यायो।
वर्षको लागि सर्वश्रेष्ठ VPN (२०२०)
टिभी कार्यक्रम अनलाइन हेर्नुहोस्
Swagbucks समीक्षा (२०२०) - यो Legit वा घोटाला हो?
Android का लागि यूट्यूब संगीत रूपान्तरण
रोब्लोक्स संगीत कोड बिच्छेदको लागि
नेटफ्लिक्स खाता ईमेल र पासवर्ड
साइन अपका लागि नि: शुल्क अमेजन उपहार कार्ड
अमेजन प्राइम ट्रायल नयाँ खाता
नि: शुल्क टिभी कार्यक्रमहरू अनलाइन हेर्नका लागि उत्तम ठाउँ
सबै भन्दा राम्रो नि: शुल्क प्रत्यक्ष टिभी स्ट्रिमि service सेवा